Ciidamada huwanta oo la wareegay deegaanada Naasiriya iyo Weelmaar
Kismaayo:-Ciidamo ka tirsan Ururka Raaskambooni iyo kuwa DFS oo ay kaabayaan ciidamada Kenya ayaa la wareegay deegaanada Naasiriya iyo Weelmaar ka dib markii ay halkaas ka baxeen ciidamada Al-Shabaab .
Ciidamada Ururka Raaskambooni iyo kuwa DFS ayaa shalay ka soo ruqaansaday Degmada Afmadow waxaana ay haatan ku sugan yihiin deegaanada Naasiriya iyo Weelmaar sida ay ku soo warmayaan dad goobjoogayaal ah .
Saraakiisha Ciidamada huwanta ayaa ku goodiyey in ay dhawaan la wareegi doonaan dhawaan Degmooyinka Bu’aale iyo Degmada Xagar oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada Ururka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale saaka laga dareemayaa Dhaqdhaqaaq ciidan o ay ka wadaan labada dhinac deegaanada Duleedka magaalada Kismaayo ,Buula-Gaduud , Jamaame, Jillib iyo Bu’aale waxaana la arkayey ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo tijaabsanaya hubka noocyadiisa kala duwan.
Sarkaal ka tirsan ciidanka DFS oo magaciisa la yiraahdo G/sare Maxamed Cali ayaa warbaahinta u sheegay in la wareegida deegaanada Naasiriya iyo Weelmaar ay u sahleyso in ay qabsadaan Degmooyinka Bu’aale iyo Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe .
Ilaa haatan ma jiraan saraakiil ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo ka hadlay la wareegida deegaanada Naasiriya iyo Weelmaar .